आँफुभन्दा १० वर्ष कान्छा ह्याण्डसमसँग विबाह गरिन् चर्चित नायिका नम्रता श्रेष्ठले – Sandesh Press
October 2, 2021 220
फुभन्दा १० वर्ष कान्छा ह्याण्डसमसँग विबाह गरिन् चर्चित नायिका नम्रता श्रेष्ठले, विबाहमा लेहेंगा मात्रै किनिन् १५ लाखको, सुटुक्क गरिएको विबाहको एउटा क्लिप बन्यो भाइरल, हेर्नुहोस् उक्त भिडियो
दोस्रो बजारमा नेप्से सूचक लगातार घट्दै गएपछि कारोबार रकम समेत घट्दै गएको हो। बुधवार मात्रै शेयर बजार मापक सूचक ३२.५१ अंकले घटेको छ। गएको एक महिनादेखि सूचकमा दबाव पर्दै आएको छ। गत सातादेखि सूचकमा तीव्र दबाव परिरहेको छ। शेयर सूचक घट्दै जाँदा कारोबार रकममा समेत प्रभाव परेको शेयर विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन्। कारोबार रकम घट्दै जानुलाई प्राविधिक रुपमा राम्रो मान्नु पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।सात महिना यताकै न्यून रकमको कारोबार,किन घट्यो कारोबार ? यसले के सङ्केत गर्छ ? बिहीबार सात महिना यताकै न्यून कारोबार भएको छ। शेयर कारोबार हुने दोस्रो बजारमा बिहीबार सात महिना यताकै न्यून कारोबार भएको हो। बुधवार नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोबार कक्षमा तीन अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरका शेयर किनबेच भए।
दोस्रो बजारमा नेप्से सूचक लगातार घट्दै गएपछि कारोबार रकम समेत घट्दै गएको हो। बुधवार मात्रै शेयर बजार मापक सूचक ३२.५१ अंकले घटेको छ। गएको एक महिनादेखि सूचकमा दबाव पर्दै आएको छ। गत सातादेखि सूचकमा तीव्र दबाव परिरहेको छ। शेयर सूचक घट्दै जाँदा कारोबार रकममा समेत प्रभाव परेको शेयर विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन्। कारोबार रकम घट्दै जानुलाई प्राविधिक रुपमा राम्रो मान्नु पर्ने विश्लेषण गरिएको छ